Kedu ihe ị ga-atụ anya na Philippines? Maka Filipino - 1aviagem.com
Edebere 12 February 2019 site Römulo Lucena
Anyị na bọs na Russia
Taa, anyị ga-amaratụtakwu banyere obodo a - agwaetiti a na-akpọ Philippines. Anyị na-amalite nyochaa ịmatakwu banyere obodo a, nke bụ nnukwu agwaetiti Asia. Ọ dịghịkwa onye ka mma ịgwa anyị ntakịrị banyere ya karịa Filipino. Ọ bụ ya mere m ji agwa enyi m Filipino okwu taa - Jeff.
M zutere Jeff n'oge mbụ m gara Russia, bụ nke gbasara Poland. Anyị bụ otu ìgwè nke ndị mere njem a ma mesịa ghọọ enyi. Jeff bụ onye na-achọsi ike Ihọd!
Jeff bụ ịmata
Ọ dịkwa ezigbo enyi ma nwee ezigbo nkà na ụzụ. Ị nwere ike ịlele ha maka onwe gị na blog ya ma hụ na anaghị m ekwubiga okwu ókè: naanị ịnweta: http://jeffoutsidethebox.com/
Ee, ọ bụ, ma ọ bụ, onye blogger n'oge oge efu (dịka m na-agbalị ime ugbu a). Ya mere, nke a bụ "nzukọ mbụ nke ndị na-ede blọgụ" (site na njem mbụ nke blog - 1aviagem.com). Ma ọ bụ onye ọkachamara ọkachamara, m ka bụ onye na-amu amu.
Jeff bụ, ugbu a, naanị Filipino m maara! Ọ dị mma, m na-eme atụmatụ ịgbanwe nke a site na ịmata Philippines, iji tinyekwuo ndị enyi Filipino (LOL). Enwere m olileanya na ha dị ka enyi na ndidi dịka ọ dị.
Mana maka nke ahụ, achọrọ m ụfọdụ ozi nkenke gbasara Philippines ma ya mere m gwara Jeff ka ọ rụọ ajụjụ a.
Ya mere, ka anyị kwuo banyere Philippines taa.
Dịka omenala na blog a, a ga-agba agba egwu iji mee ka ọ dịkwuo mfe maka onye na-agụ ya ịmata onye na-ekwu okwu. Aga m eji akwụkwọ ozi na-acha anụnụ anụnụ maka okwu m na Jeff ga-enwe akwụkwọ ozi ọbara ọbara.
N'ikwu ya, ka anyị malite!
1 - Jeff, ebee ka amụrụ gị? Kedu ebe i bi taa?
A mụrụ m n'akụkụ ugwu nke Philippines, ma ugbu a, m bi na San Francisco (USA).
Abụ m onye ọkà mmụta sayensị na-eme nnyocha
3 - Gini mere i ji kwaga biri n'èzí?
N'ikwu eziokwu, ana m achọ ọrụ ka mma na ọnọdụ ego.
4 - Kedu ihe ị masịrị banyere Philippines?
Anyị ile ọbịa. Anyị nwere mkparịta ụka ebe obibi njem: "Ọ bụ ihe na-atọ ụtọ na Philippines" n'ihi Filipinos. Anyị Filipinos dị ezigbo enyi ma na-ele ọbịa. I kwenyeghi!!
Ee, kwenye kpam kpam! hahaha LOL
5 - kedu ihe ị ga-agbanwe n'ebe ahụ, ma ọ bụrụ na i nwere ike?
M hụrụ Philippines n'anya, mana enwere ọtụtụ ihe na-amasịghị m. Ihe mbụ bụ oku "Oge Filipino" - nke a pụtara ịbịaru oge ma ọ bụ oge elekere tụnyere oge a kara aka. Nke abụọ bụ ike na-adịghị ike nke iwu. Ọzọ bụ atụmatụ jọgburu onwe ya n'obodo mmepe. Onye ọzọ bụ enweghị ịdọ aka ná ntị, nrụrụ aka, ụkọ nke usoro ikpe ziri ezi na ihe ndị ọzọ. Ọ bụrụ na m nwere ike ịgbanwe ọtụtụ n'ime ndị a ... Enwere m ike iche n'echiche ebe anyị ga-aga.
6- Amaara m na ị nwere ebe nchekwa dị mma maka abụ, ọ bụ ọdịbendị, ma ọ bụ na ọ bụ naanị akụkụ nke Jeff? (M na-ekwu nke a n'ihi na n'oge njem ọ zụrụ na Karaoke).
Echere m na ọ bụ omenala. Ọtụtụ Filipinos na-enwe mmasị ịkwọ abụ (ọbụlagodi ma ọ bụrụ na i nweghị ụda!) Ọ bụ ihe nkwụsị ịsị na anyị hụrụ karaoke n'anya. Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụlọ ọ bụla na Philippines nwere igwe karaoke ma ọ bụ igwe okwu anwansi. Ememe dum site na otu oriri na ụlọ ọrụ, ụbọchị ọmụmụ, na agbamakwụkwọ nwere karaoke. Nke a bụ ememe mba anyị. Ọ dịghị mkpa ma ọ bụrụ na ị dị mma na ya ma ọ bụ, naanị na-abụ abụ! Ọ bụ ya.
7 - Ọ bụ eziokwu na Philippines nwere ihe karịrị agwaetiti 7.000? Kedukwa asụsụ asụsụ ahụ?
Ha bụ agwaetiti 7.641 ka ọ bụrụ kpọmkwem! M na-eche oge ole ọnụ ọgụgụ a ga-adị ugbu a n'ihi mgbanwe ihu igwe na okpomoku ụwa. Ya mere ee, i nwere ike inwe ihe karịrị 20 agwaetiti kwa ụbọchị iji chọpụta na Philippines!
Filipino bụ asụsụ asụsụ anyị, ma ọtụtụ Filipinos na-asụkwa Bekee.
8 - kedu ihe ị ga-atụ aro ka onye njem nleta mee ma ọ bụ gaa na Philippines na njem mbụ?
Ana m ekwu mgbe niile ka m gaa Boracay. Ọ bụ àgwàetiti mara mma nke nwere osimiri na-acha ọcha, nke dị ihe dịka 170 kilomita n'ebe ndịda nke isi obodo, Manila. A na-emechi ya n'oge na-adịbeghị anya n'ihi nnukwu ebe obibi mebiri emebi nke njem njem na-adịghị mma. Ugbu a mgbe ọnwa isii gasịrị, a na-emegheghachi ya. Enweghi m ike ichere ileta paradaịs a. Ịdịdịghị eche atụmatụ njem ahụ, n'ihi na ọ dị ọtụtụ ebe ahụ. Nhọrọ ndị ọzọ bụ Palawan ma ọ bụ Cebu. Ndị na-eme nlegharị anya na-abịa na Philippines n'ihi ụsọ oké osimiri.
Jeff na Boracay si (http://jeffoutsidethebox.com/)
9 - Gini banyere blog gi, i bu n'obi imegide?
M ga-ahụ n'anya, ma anaghị m arụsi ọrụ ike ide. Ma eleghị anya, post ma dee na mgbasa ozi dịka Instagram, nke dị mfe ime.
10 - Ego ole ka ị gara?
Ọfọn, enweghi m ọnụ ọgụgụ ... ma ejiri m n'aka na ha nọ n'elu 50.
Lee, m ga-achọ ka m nweta nọmba a. LOL. Aga m eme hahaha kacha mma. (I.e.
11 - Jeff, oleekwa ihe mere i ji eme njem nke ukwuu?
Achọrọ m ịga njem mgbe niile. N'uche m, ị gaghị akwụ ụgwọ maka ihe ncheta ị nwetara mgbe ị na-eme njem. Ndị ọzọ na-ahọrọ ndụ na ihe onwunwe, mana m họọrọ ndụ na ahụmahụ. Anyị enweghị ike ịkọ ihe ga - eme n'ọdịnihu ma ọ bụrụ na anaghị m adị ndụ iji hụ na m na - ahụ, iri ise ma ọ bụ sixties, agaghị m akwa ụta ọ bụla. Ya mere, ejikọrọ m na ụwa ma ejupụta m.
Oh, nke a bụ ụzọ dị mma isi eche echiche!
Jeff, enwere m olileanya na ị ga-eji ike a na-agagharị n'ụwa. Ekwenyere m na anyị niile mgbe anyị na mmadụ na-emekọ ihe, ma ọ bụrụ na anyị nwere ike ịmalite, ma ọ bụ nyere onye a aka, mgbe ahụ, nke a bụ ụzọ dị mma isi gbanwee ụwa.
Ụwa choro ka otutu ndi mmadu ndi na ebi ndu ka ha nwee ihe omuma ma ghara ibi ndu inweta ihe onwunwe.
Na ebe a, anyị ga-emecha nyocha a. Daalụ Jeff, ụwa chọrọ ihe Jeffs hahaha.
Daalụ maka mkparịta ụka a, ọ na-atọ ụtọ.
Maka ajụjụ ndị ọzọ, aro na akụkọ ihe mere eme dị ka nke a, biko pịa obere map anyị n'okpuru ebe a.
Dịka ngwụcha ngwụcha nke onye ọkwọ ụgbọ mmiri oge mbụ na Philippines ịkwaga, m na-ahapụrụ njikọ ntinye akwụkwọ ebe ọ dị mfe ma dị mfe iji tinye akwụkwọ maka ịntanetị.
Ọ bụrụ na ị masịrị ya, pịa bọtịnụ dị n'okpuru. Ma ọ bụ hapụrụ okwu gị, kesaa, ma nyere anyị aka igwu ụwa. (I.e.